လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို ကန့်လန့်ကာချခဲ့တဲ့ ဟွန်ဒါနဲ့ ဟာဆီဘီ
ဂျပန်လက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူခဲ့ကြတဲ့ ဟွန်ဒါ Honda နဲ့ ဟာဆီဘီ Hasebe
5 Jul 2018 . 6:34 PM
ဂျပန်အသင်းရဲ့ ၀ါရင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဟွန်ဒါ Honda နဲ့ ဟာဆီဘီ Hasebe တို့ဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းကနေ အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အသင်းဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို လက်ပြန်နှုတ်ဆက်ခဲ့အပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ဟွန်ဒါနဲ့ ဟာဆီဘီတို့ လက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ဟွန်ဒါဟာ ဂျပန်အသင်းအတွက် (၉၈)ပွဲကစား (၃၇)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။
ဟွန်ဒါက “အရည်အသွေးမြင့်လူငယ်ကစားသမားတွေရှိနေလို့ ဂျပန်အသင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက် ကျွန်တော် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘောလုံးလောက သမိုင်းသစ်ကိုရေးဖို့က သူတို့တာဝန်ဖြစ်သွားပါပြီ”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
သူနဲ့အတူ ဂျပန်အသင်းခေါင်းဆောင် ဟာဆီဘီကလည်း သူ့ရဲ့(၁၂)နှစ်ခွဲကြာ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါပြီ။ ဂျပန်အသင်းအတွက် (၁၁၄)ပွဲကစားခဲ့သူ ဟာဆီဘီက”၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး (၁၂)နှစ်ခွဲကြာ ကျွန်တော်နဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဖော်တွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂျပန်အသင်းပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး အသင်းနဲ့အိပ်မက်အသစ်တွေ အတူတူ ဆက်မက်ကြရအောင်လား”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂပြနျလကျရှေးစငျအသငျးက အနားယူခဲ့ကွတဲ့ ဟှနျဒါ Honda နဲ့ ဟာဆီဘီ Hasebe
ဂပြနျအသငျးရဲ့ ဝါရငျ့ကှငျးလယျကစားသမားတှဖွေဈကွတဲ့ ဟှနျဒါ Honda နဲ့ ဟာဆီဘီ Hasebe တို့ဟာ လကျရှေးစငျအသငျးကနေ အနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျအသငျးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို လကျပွနျနှုတျဆကျခဲ့အပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ ဟှနျဒါနဲ့ ဟာဆီဘီတို့ လကျရှေးစငျအသငျးက အနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ။ အသကျ(၃၂)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ ဟှနျဒါဟာ ဂပြနျအသငျးအတှကျ (၉၈)ပှဲကစား (၃၇)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး အသငျးနဲ့အတူ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှေ ဆငျနှဲခဲ့ပါတယျ။
ဟှနျဒါက “အရညျအသှေးမွငျ့လူငယျကစားသမားတှရှေိနလေို့ ဂပြနျအသငျးရဲ့အနာဂတျအတှကျ ကြှနျတျော ကနြေပျပြျောရှငျပါတယျ။ ဂပြနျဘောလုံးလောက သမိုငျးသဈကိုရေးဖို့က သူတို့တာဝနျဖွဈသှားပါပွီ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
သူနဲ့အတူ ဂပြနျအသငျးခေါငျးဆောငျ ဟာဆီဘီကလညျး သူ့ရဲ့(၁၂)နှဈခှဲကွာ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတျခဲ့ပါပွီ။ ဂပြနျအသငျးအတှကျ (၁၁၄)ပှဲကစားခဲ့သူ ဟာဆီဘီက”၂၀၀၆ ခုနှဈကစပွီး (၁၂)နှဈခှဲကွာ ကြှနျတျောနဲ့အတူ တိုကျပှဲဝငျခဲ့တဲ့ အသငျးဖျောတှေ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဂပြနျအသငျးပရိသတျတဈဦးအဖွဈ ဆကျရှိနမှောဖွဈပွီး အသငျးနဲ့အိပျမကျအသဈတှေ အတူတူ ဆကျမကျကွရအောငျလား”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 20 hours ago